Torohevitra 3 ho an'ny mpivarotra hiarovana ny teny miafin'ny media sosialy | Martech Zone
Torohevitra 3 ho an'ny mpivarotra hiarovana ny tenimiafin'ny haino aman-jery sosialy
Alahady 30 aprily 2017 Talata, May 2, 2017 Douglas Karr
Nandritra ny herinandro lasa teo, manandrana mividy ny teny miafin'ny mpanjifa izahay Youtube kaonty. Tsy misy zavatra mampahory sy mandany fotoana mihoatra ny fanaovana an'io. Ny olana dia ny mpiasa iray nitantana ny kaonty tampoka fotsiny dia nandao ilay orinasa - fa tsy tamin'ny fe-potoana tsara indrindra. Nanao izay fara herinay izahay amin'ny maha mpanelanelana anay hanandrana haka ny teny miafina, saingy nilaza izy ireo fa tsy fantany intsony izay.
Mazava ho azy, Google dia tsy dia manampy loatra amin'ny fametrahana fanontaniana fanamarinana toy ny volana sy taona nanokafanao ny kaonty, ny fanontaniana miafina (an'ny mpiasa izay tsy eo intsony) ary avy eo manolo-tena hanao famerenana hafatra an-tsoratra… amin'ny tsipika tanin'ny orinasa izay tsy afaka mandray azy ireo.
Farafaharatsiny fantatsika fa azo antoka ny kaonty ary tsy ampidirina. Ny tranga ratsy indrindra dia ny kaonty voajirika izay tsy misy fomba hamerenana azy io eo ambany fifehezan'ny marika. Ny fahatokisana no singa manakiana amin'ny fifanakalozana an-tserasera, noho izany ny fijerena ny marika voajirika dia mety hisy fiatraikany lehibe. Tsy ampy ny miala tsiny fotsiny izao - mila miasa ianao mba hisorohana azy. Ireto misy fomba 3 soso-kevitra amin'ny fisorohana ny fanapahana ny kaonty marketing anao:
Mampiasà fanamarinana finday - Fanamarinana finday na Fanamarinana 2-dingana dia hita eo amin'ny tranonkala sosialy lehibe rehetra (Twitter, Facebook, Google, LinkedIn). Amin'ny ankapobeny, rehefa miditra avy amin'ny fitaovana vaovao ianao (na indraindray misy fitaovana hafa) dia andefasana kaody hafa ianao hanamarinana amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra na mailaka. Raha atao teny hafa, raha misy manova na mametaka ny teny miafinao amin'ny kaonty sosialy, dia mila miditra amin'ny telefaona finday ampiasaina amin'ny fanamarinana koa izy ireo. Ampiasaiko hatraiza hatraiza aho. Raha manana olona marobe manamarina izany kaonty izany ianao dia manana olona afovoany izay nampandrenesina koa.
Ampiasao ny Apps Enterprise Party fahatelo - Aza aparitaka amin'ny mpampiasa na masoivoho ny tenimiafinao amin'ny alàlan'ny fampiasanao ny fampiharana an'ny antoko fahatelo hamoahana ny kaonty. Tiantsika Hootsuite. Amin'izany no ahafahantsika manampy sy manala ireo mpampiasa amin'ny kaonty mora foana, na mahazo miditra amin'ny kaontin'ny mpanjifa, nefa tsy mila mahafantatra ny teny miafiny na manome ny anay. Raha toa ka voafitak'izy ireo ny kaonty avy amin'ny antoko fahatelo, farafaharatsiny tsy azon'izy ireo atao hi-jack ny kaonty sosialinao voalohany! Azonao atao ihany koa ny manara-maso ny fidirana an-tsokosoko mora kokoa ho an'ilay olona namoaka azy ary manala ny kaontiny mora foana. Ny Youtube dia manana ny fahaiza-manaon'ny mpitantana, ary koa ny Facebook for Business. Raha mandao ny mpiasa iray na ny masoivoho… esory fotsiny izy ireo amin'ny lisitra fidirana.
Mampiasà mpitantana teny miafina - Ny fampiasana fitaovana hitantanana tenimiafina dia tsy hoe hanamora ny fidirana fotsiny, fa ny fampiasana teny miafina tena mahery, ny teny miafina isan-karazany isaky ny serivisy ary manova matetika ny tsirairay amin'izy ireo. Tianay Dashlane ary mamporisika azy mafy - manana plugin plugin, rindranasa finday ary endri-javatra lehibe izy ireo. Hovarin'izy ireo aza ny safidin'ny tenimiafinao (na fidio iray ho anao). Tianay indrindra ny fahaizan'ny mizara tenimiafina ho an'ireo tranonkala manana fidirana voafetra. Ny mpampiasa dia afaka miditra amin'ny alàlan'ny sehatry ny Dashlane saingy tsy afaka mahita ny teny miafina.
Ny fahaverezan'ny fidirana amin'ny kaontinao eo amin'ny media sosialy dia mahamenatra ary aretin'andoha tsy ilaina tsy maninona na voajirika ianao na miala ny mpiasa iray, na voaroaka na voaroaka. Ny fotoana, ezaka ary fahasosorana hanandrana hamerina ny kaontinao hiverina hifehezana dia tsy mendrika hanaovana risika amin'ny fanaparitahana tenimiafina tsotra ho an'ny anatiny sy ivelany. Aza atao mora izany amin'ny alàlan'ny fampiasana mpitantana teny miafina, fanamarinana singa roa ary ny fahaizan'ny orinasa.
Tags: dashlanehootsuiteny tenimiafinasecuritytenimiafin'ny media sosialy
Ianao ve mila fepetra sy fepetra, ny fiainana manokana sy ny politikam-pisakafoanana?